Mareykanka oo xaqiijiyay weerar uu ku qaaday Daacishta Afghanistan
Milatariga Mareykanka ayaa Sabtidii duqeyn la bartilmaameedsaday xubno ka tirsaan Daacishta Afghanistan, taas oo ay fuliyeen diyaarad aan duuliye laheyn, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha Mareykanka.
Taliska Dhexe ee Mareykanka ayaa sheegay in weerarka laga fuliyay gobolka Nangarhar, bartilmaameedkiisuna uu ahaa qof la rumeysan yahay inuu ka dambeeyay qorshaynta weerarradii ay dadka badani ku dhinteen oo ka dhacay Kabul.
Captain William Urban ayaa sheegay in hal qof oo ka tirsan Daacish lagu dilay duqeyntii Sabtidii.
Illaa iyo hadda ma cadda in shakhsigan ku lug lahaa weerarkii lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee Kabul khamiistii, kaas oo lagu dilay 170 qof oo Afgaanistaan ah iyo 13-ka tirsan askarta Mareykanka.
Safaaradda Mareykanka ayaa Jimcihii ku boorrisay muwaadiniinta Mareykanka inaysan imaan garoonka diyaaradaha ee Kabul sababo la xiriira hanjabaadyo amni, isla markaana ay si degdeg ah uga baxaan haddii ay ku dhow yihiin mid ka mid ah afarta irdood ee garoonka, sida lagu sheegay bayaan lagu qoray bogga Wasaaradda Arrimaha Dibadda.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Khamiistii ku hanjabay in Mareykanku ka aargudan doono kuwii ka dambeeyay qaraxii ka dhacay garoonka Hamid Karzai ee magaalada Kabul, isagoo sidoo kale cambaareeyay falkaas.
Afhayeenka Waaxda Gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon John Kirby ayaa Jimcihii warbixin kooban ku sheegay in Mareykanku rumeysan yahay inay jiraan hanjabaadyo kale oo ka dhan ah garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul.